Ja Tawng Naw (ဂျာတောင်နော်)
Tsaw ra ai rau hkam sha hkrum nga ai mung shawa masha ni e,
Jinghpaw wunpawng Amyu sha ni KIOaTingyang up malai 1 Dukaba Gauri Zau Seng hte Tingyang up malai2Dukaba Manam Tu Ja yan KIO ginjaw salang kaw na pru nna hkring sa mat na tang shawng dat ai.
Shawng ningnan, Tingyang up Malai 1 Dukaba Gauri Zau Seng hte Tingyang up malai2Dukaba Manam Tu Ja yan gaw tinang amyu sha lawt lu lamamatu grai shakut shaja lai wa sai rawt malan ningbaw ningla lahkawng rai nga ai. Raitim, KIO ni Myen gumshen hpye hte gap hkat jahkring la ngut ai hpang gaw Hpyen hpe hpyen hku n yu, Jinghku shatai, amyu sha lawt lu lam hpe madung n da, tinggyen akyu tam mung masa ginsup shachyai ai mung masa la hku rai mat ai gaw amyu sha yawngamatu yawn hpa lam rai sai hku re.
Du kaba Gauri Zau Seng gaw, KIO hpe Kachin Progressive Party hku mying galai nna lang hte lang shakut lai wa sai hte maren, tinang KIO hte amyu sha nialu gin lu ang ai mung masa ahkaw ahkang lu hkra tut nawng shakut na malai, hpyen wa jaw ai daram la na ngu ai masa hpe hkap la ai wa rai nga ai. Myen hpyen gum shen ladat tutnawng dinggrin lu na matu hpyen waa2008 ning May shata hta atik anang shagrin da ai gaw da ai tara hpe mung KIO u hpung hku nna hkap la hkra chye nga dinglen woi awn ningshawn tai wa sai rai nga ai. Ya ga jarit sin dap de galai shai na matu hpyen waeatik anang galaw ai masing hta asan sha ninghkap ningdan kau na malai lam amyu myu hku bawnu shachyai let, KIO mying hte ninggawn yaw shada lam hpe galai shai lu hkra nga, Jinghpa w Mungdaw makawp maga dap (Kachin State Defence force) ngu ai hpyen waaninggawn masa (strategic aim) hpe hkap la ai wa rai nga sai. Kadai mung tinang hkap la kam sham ai hpe n dut ndang hkap la hkam sham mai ai raitim, anhte Jinghpaw Wunpawng Amyu sha niamung masa gaw amyu sha lawt lam rawt malan mung masa naw re nga ai majaw, rawt malan hpung KIO ginjaw salang n tai gring sai hte maren hkring sa na matu hpyi shawn dat ai.
Dukaba Dr. Manam Tu Ja gaw, Myen hpyen ni woi galaw ai National Convention de KIO dakkasa woi awn ningshawn tai nna shang lawm lai wa sai rai nga ai. 2004 ning hte 2007 ning hta tinang KIO ni ra sharawng ai madu up hkang masa lai len hpe tang shawng lai wa sai hpe hpyen ni ningdan kau ya ai raitim dai NC gaw hpyen waamasu magaw mung shawa zuphpawng rai nga ai hpe chye nga dinglen 2007 ning May shata na NC ginchyum dat hpawng hta yawngamalai hku Hpyen waaPrime Minister Sein Win de NC hpe awng dan ai hte shangut la sai lam hpe gaya n si mung mashaamaneap ya lai wa sai rai nga ai. KIO hpe mying galai mayu, KIO kaw na pru nna Myen hpyen niamayam galaw lamang7hta ra lata poi shang, Kachin State Minister byin mayu ai, ting gyen ahkyu ara tam masa hku nna pranwan komiti nga hpaw ninghtan shakut nga ai wa mung rai nga ai. Ya hkayk hkayk, KIO hpe ga jarit sin dap de galai shai la lam hpyen waeatik anang galaw ai lam hpe mung, amyu sha yawngashawng lam lawt lu lam hpe n yu ai sha, hpyen wa hpe jinghku shatai mayu ai majaw, hpyen waaninggaw masa (strategic aim) hpe hkap la ai ting gyen akyu tam ningbaw langai tai mat sai re majaw, amyu lawt lu lam hpe madung da ai KIO u hpung kaw na pru nna hkring sa la ra sai lam hpyi shawn dat ai.
Posted by Ja Tawng Naw at 2:06 PM0comments Links to this post
kachin model and celebrities
Posted by Ja Tawng Naw at 8:55 PM0comments Links to this post
What about now..!
Daughtry - New Music - More Music Videos
Posted by Ja Tawng Naw at 7:45 PM0comments Links to this post
နယ်ခြားစောင့်၊ မစောင့် စစ်အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးမည့် ကေအိုင်အို
လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များတွင် အင်အားကြီးမားသော ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် မှ အမျိုးသမီး စစ်သမီးတပ်ဖွဲ့
မြန်မာစစ်အစိုးရ မှ ထုတ်ပြန် ကြေညာထားသော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးမြောက်ပါက စစ်အစိုးရ နှင့် စေ့စပ် ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူထားသော လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များအား နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များ အသွင်ပြောင်းကာ စစ်အစိုးရ တပ်ရင်း၊ တပ်ဖွဲ့များ လက်အောက်သို့ ရောက်ရှိ သွားရမည် ဖြစ်သည်ကို ကချင် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ကော်မတီ ၇ဦး ဦးဆောင်ကာ စစ်အစိုးရနှင့် အကျေအလည် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ကေအိုင်အို သတင်းရပ်ကွက်မှ ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။
အထက်ပါ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွင် ကေအိုင်အို ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ဂေါ်ရီ ဇော်ဆိုင်း၊ ကေအိုင်အို ဗဟိုကော်မတီဝင် ဒေါက်တာ လဂျာ၊ ကေအိုင်အေ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော်၊ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး လဖိုင် လအောင်၊ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး လဇိန် ဂျီနော်၊ ဗိုလ်မှူး ဂေါ်လူ လအောင် နှင့် ခွန်ထက် ထိန်နန် တို့ ပါဝင်သည်ဟု သိရှိရသည်။ ယင်း ၇ဦးပါ အဖွဲ့အား ယခင်အပါတ်က လိုင်ဇာတွင် ပြုလုပ်သော ကေအိုင်အိုနှင့် ကချင်ပြည်သူများ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု အပြီး ထွက်ပေါ်ရလဒ် ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် ကချင်ရေးရာ သုံးသပ်သူတဦး ကမူ “ ဒါဟာ ကေအိုင်အို အတွက်တော့ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတော့ မဖြစ်နိုင်ဖူးလို့ ပြောဆိုလိုက်ပြီး၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ အတွက် အသေအခြာ စဉ်းစားရမဲ့ ရှုထောင့်တခု ဖြစ်နေတာရယ် ဘယ်ရလဒ်မဆို ဒီအဖြစ်ဟာ ချိန်သားကိုက် သတ်ကွင်းထဲကို ဖြတ်ခိုင်းတာနဲ့ တူပါတယ်ဟု သူ၏ အမြင်ကို ဖြေဆိုကာ၊ ဒီအချိန်ဟာ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်များ အနေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် အပေးအယူလုပ်ရမဲ့ နိုင်ငံရေး ကစားကွက်တခု ယတိပြတ် ရွေ့ရမဲ့ အချိန်ပါဟု ပြောဆို သုံးသပ်လိုက်သည်။
ထပ်လောင်း၍ ကေအိုင်အို ဦးဆောင်ကော်မတီမှ ဦးဆောင်ကာ ကေအိုင်အို နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ အဖြစ် အသွင်ပြောင်းမည့် အရေးအား ကချင် မျိုးနွယ်စုများစွာ ရှိရာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ ကချင်ပြည်သူများထံ နည်းနာ အကြံဥာဏ်များ ရယူသင့်ကြောင်း၊ ယင်း အရေးအတွက် ရာနှင့်ချီသော နိုင်ငံရပ်ခြားရောက် ကချင် အဝန်းအဝိုင်းမှ တုန့်ပြန်စာများလဲ ရရှိထားပြီ ဖြစ်သည်ဟု ကချင်ပို့(စ်) ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖေါ်ပြထားပြီး၊ အများစုမှာ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့အဖြစ်အား လက်ခံနိုင်ဖွယ် မရှိဟု တွေးထင် ယူဆထားကြသည်။
အပစ်အခတ် ရပ်စဲ၍ ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူထားသော လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ စစ်အစိုးရ လက်အောက်ရှိ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့များ အသွင် သဏ္ဍာန်ပြောင်းလည်း ရမည်ဟူသော အမိန့်အား ၂၀၀၉ခုနှစ် မေလ တွင် ထို သတင်း ထွက်ပေါ်လာပြီး၊ စစ်အစိုးရ ဖက်မှလည်း ယခု နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင် အကောင်အထည် ဖေါ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
လူထုအသံ အွန်လိုင်းဂျာနယ် အတွက် ရေးသားခဲ့သော ၀၆-၀၆-၀၉ သတင်း
Posted by ဒူကဘာ at 5:50 AM0comments Links to this post
An hteamyu shayi ni mung atsam nshayawm ai sha
Posted by Ja Tawng Naw at 3:46 PM0comments Links to this post
Lit Lu Ai Shagan Ni hpe La Nga Ai NgeaMungdan
Find more videos like this on Jinghpaw Wunpawng Chyum Hkawlik
Posted by Ja Tawng Naw at 3:30 PM0comments Links to this post
Gau ai Mungdan
Posted by Ja Tawng Naw at 3:25 PM0comments Links to this post
ဗိုလ်မှူးကြီး ဆွန်လွတ်ဂွမ်မော် ကေအိုင်အေ၏ ဒု-ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် အဖြစ် ခန့်အပ်ခံရ
ကေအိုင်အေ ၏ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အသစ် ဖြစ်လာသော ဗိုလ်မှူးကြီး ဂွမ်မော် © Photo Credit: ကချင် သတင်းအဖွဲ့
ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ များအား ဖိအားပေးကာ နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့များ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလည်း မည်ဟု မြန်မာ စစ်အစိုးရမှ ကြေညာ လိုက်ချိန် များမကြာမီတွင် ရေငုံ နှုတ်ပိတ်နေသော ကချင် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (ကေအိုင်အေ) မှ ဗိုလ်မှူးကြီး ဆွန်လွတ် ဂွမ်မော်အား ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်သည်။
ယခင်က ဗိုလ်မှူးကြီး ဂွမ်မော် ( အသက် - ၄၇နှစ် ) မှာ ကေအိုင်အို၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ရာထူးအပြင်၊ မဟာ ဗျူဟာ နည်းဗျူဟာ လေ့လာရေး ဋ္ဌာနမှ ဒါရိုက်တာ အဖြစ် ပူးတွဲ တာဝန် ထမ်းဆောင် နေပြီး၊ ကေအိုင်အို အဖွဲ့၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် တဦးဖြစ်ကာ ကေအိုင်အေ ၏ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အချက်အခြာကျသော ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်သူဟု ကျော်ကြားသူလည်း ဖြစ်သည်။
ဧပြီလ (၆) ရက်နေ့က ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဖြစ်သော ဗိုလ်မှူးချုပ် ဖန်ဂမ် ဇော်နန် အသည်း ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန် သွားအပြီး တလကျော် အကြာတွင် ထိုနေရာအား ဗိုလ်မှူးကြီး ဆွန်လွတ်ဂွမ်မော်မှ ဆက်ခံရယူ၍ သူ၏ မဟာဗျူဟာ နည်းဗျူဟာ လေ့လာရေး ဋ္ဌာန၊ ဒါရိုက်တာရာထူးအား ဒုဗိုလ်မှူးကြီး မရမ်ဇော်တောင်မှ ပြောင်းလွှဲရယူသည်ဟု သိရှိရသည်။
လိုင်ဇာမှ လာသော သတင်းများအရ ကေအိုင်အေ၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲ မရှိငြားသော်လည်း စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်တန် ဂွမ်ရှောင်နှင့် ဒု-ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဂွမ်မော်တို့၏ ကွပ်ကဲမှုဖြင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာ ထိပ်တန်းရာထူးများမှာ အဖွဲ့အတွင်းတွင် အပြောင်းအလည်း အနည်းငယ် ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။
လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ အတွင်းမှ အင်အားတောင့်တင်း ခိုင်မာသော ကေအိုင်အို အဖွဲ့အစည်းကြီးမှာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကပင် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူထားပြီး တွေ့ဆုံညှိုနှိုင်း အဖြေရှာလျက် ရှိနေရာမှ ယခုအခါ မြန်မာစစ်အစိုးရ ဖိအားကြောင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များ အသွင်သို့ ပြောင်းလဲမည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တပ်ဖွဲ့များ အားလုံးတွင် ကေအိုင်အေ၏ အဖြေမှာ နယ်ခြားစောင့် မည်လော? ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်သော စစ်ပွဲများဆီ ထိပ်တိုက်တိုးမည့် သဏ္ဍာန်ပြင်ဆင် နေပြီလော? ဟု စောင့်ကြည့် နေရဦးမည်။
လူထုအသံ အင်တာနက်ဂျာနယ်တွင် ဂျာတောင်နော် ရေးသားခဲ့သော သတင်း
Posted by Ja Tawng Naw at 7:21 PM0comments Links to this post
lawt lu nang lam gaw kanang ta?
Find more videos like this on WUNPAWNG Zupra
Posted by Ja Tawng Naw at 6:34 PM0comments Links to this post
myit n gran ga
Posted by Ja Tawng Naw at 5:39 PM2comments Links to this post
Na Ning Mu Ndai kaw သင့် ရှုထောင့်တွေ ဒီမှာ
Gum hpraw Galai Manu
Amyu baw hpan (category)
Ja Tawng Naw
သစ္စာ | သ​စ်စာ
Tsaw ra ai rau hkam sha hkrum nga ai mung shaw...
Blogspot Templates by Isnaini Dot Com and Wedding Bands. Powered by Blogger